कति मान्छे सहभागी भए चितवनको एमाले दसौं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा? (भिडिओ) -
कति मान्छे सहभागी भए चितवनको एमाले दसौं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा? (भिडिओ)
VoiceNp	प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८ समय: १९:४७:२३
नेकपा एमालेले चितवनमा दसौं महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन गरेको छ। मञ्च व्यवस्थापनदेखि, गैंडाको मस्कट अनि ठूलाठूला डिस्प्ले राखेर एमालेले महाधिवेशनलाई भव्य तुल्यायो। चितवनमा ठूलो राजनीतिक दलले केन्द्रीय महाधिवेशन गरेको यो नै पहिलोपटक हो। यसअघि विद्यार्थी संगठन र विभिन्न संस्थाका अधिवेशन भए पनि चितवनमा यति ठूलो राजनीतिक जमघट पहिलोपटक भएको हो।
उपस्थितिका हिसाबले चितवनको इतिहासमै एमाले महाधिवेशन अहिलेसम्मकै धेरै मान्छे उपस्थित भएको कार्यक्रम समेत बनेको दाबी गरिएको छ। एमालेले महाधिवेशनमा ५ लाख मानिस उतार्ने दाबी गरेको थियो। दाबी अनुसार नभए पनि झण्डै २ लाख मानिस उपस्थित भएको स्थानीयको आकलन छ। ट्राफिक प्रहरी स्रोतका अनुसार शुक्रबार दुई हजारभन्दा बढी ठूला सवारी साधन, करिब १० हजार वटा मझौला तथा साना सवारी साधन र पाँच हजार बढी मोटरसाइकल महाधिवेशनका लागि चितवन प्रवेश गरेका थिए।
चितवन बाहिरका जिल्लाबाट डेढ लाख र चितवनबाट ५० हजार मानिस उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएको अनुमान छ। यसअघि एमालेमा राजनीतिक दलका सभामा ३० देखि ५० हजारसम्म मानिस भेला भएको बताइएको छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि केपी शर्मा ओलीले नै चितवनमा गरेका सभामा पनि झण्डै ५० हजार मानिस भेला भएका थिए। त्यसबाहेक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सभा र केपी शर्मा ओलीका सभामा मानिसहरू चितवनमा भेला हुने गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले केही वर्ष चितवनमा महाधिवेशन गरेको थियो। त्यसबखत पनि राम्रै राजनीतिक जमघट भएको थियो। तर सभामा ठूलो उपस्थिति देखिएको थिएन।
चितवनमा नियमित चितवन व्यापार महोत्सवमा पनि ठूलै जमघट हुने गरेको थियो। देशकै ठूलो दल नेकपा एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गरेपछि अन्य ठूला कार्यक्रम र राजनीतिक दलका कार्यक्रम समेत अब चितवनमा केन्द्र बन्न सक्ने देखिएको छ।
कति मान्छे आए महाधिवेशन उद्घाटनमा हेर्नु00होस् भिडिओ